St. Eustatius: Tsy misy quarantine intsony ho an'ny Statians vita vaksiny
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Md Eugène » St. Eustatius: Tsy misy quarantine intsony ho an'ny Statians vita vaksiny
Ireo mponina ao Statia izay vita vaksiny tanteraka dia tsy mila mankany amin'ny quarantine rehefa miditra any Statia aorian'ny fitetezana any ivelany
St. Eustatius dia hanamora ny fepetra arakaraka ny 11 aprily 2021
Ireo mponina Statia miverina avy any ivelany dia mbola mila manana fitsapana PCR ratsy hatrany
Ny fepetra fanalefahana dia tsy mihatra amin'ny mpizahatany, na dia vita vaksiny aza
Ny Public Entity St. Eustatius dia hanamora ny fepetra hatramin'ny 11 aprily 2021. Ireo mponina ao Statia izay vita vaksiny feno dia tsy mila miditra amin'ny quarantine rehefa miditra any Statia aorian'ny fitsangatsanganana any ivelany. Ity fepetra fanalefahana ity dia tsy mihatra amin'ny mpizahatany.
Ny fanapaha-kevitra hanamora ny fepetra dia noraisina taorian'ny fandinihana tsara ary taorian'ny fifampidinihana matetika tamin'ny Ministeran'ny Fahasalamana, Fiaraha-miasa sy fanatanjahan-tena any Netherlands (VWS), National Institute for Health and Environment (RIVM), ilay epidemiolojista any Saba, Andriamatoa Koen , ny Departemantan'ny fahasalamam-bahoaka ary ny ekipan'ny fitantanana krizy any Statia.
Fitsapana PRC no ilaina
Ireo mponin'i Statia miverina avy any ivelany dia mbola mila manana fitsapana PCR ratsy hatrany, saingy tsy mihatra izany raha firenena lehibe no voatsidika. Fitsapana haingana (antigen) koa dia takiana 5 andro aorian'ny fiverenany any Statia. Ankoatr'izay, ny fanalavirana ny fiaraha-monina sy ny fanaovana sarontava dia tsy maintsy atao mandritra ny 5 andro voalohany aorian'ny fidirana. Ary tsy azo atao ny manatrika hetsika misy olona mihoatra ny 25 manatrika mandritra ny 5 andro voalohany ary ny Statians miverina dia tokony hanaraka ny lalànan'ny fahadiovana mandritra ireo andro ireo toy ny fanasana tanana matetika.
Ny fepetra fanalefahana dia tsy mihatra amin'ny mpizahatany, na dia vita vaksiny aza.
Ny ankizy any ivelany ary miverina avy any amin'ny firenena misy risika dia tsy mahazo mandeha mianatra na mitaiza mandritra ny 5 andro. Ny ankizy amin'ny sokajin-taona 4 taona no ho miakatra dia hosedraina aorian'ny 5 andro. Na izany aza, ho an'ny ankizy 12 taona no ho miakatra dia misy fepetra hafa mihatra. Mila miditra amin'ny quarantine izy ireo rehefa tonga mandritra ny 10 andro. Izany dia azo atao ao an-trano mitovy amin'ny ray aman-dreniny, fa amin'ny efitrano misaraka. Ny fanavahana ireo sokajin-taona ireo dia noho ny zava-misy fa ny ankizy mihoatra ny 12 taona dia matetika manaparitaka ny virus COVID-19 kokoa noho ny ankizy eo anelanelan'ny 4 sy 12 taona.
Fitsidihana andro any St. Maarten
Ireo olona vita vaksiny feno amin'ny fatra roa amin'ny vaksinin'ny Moderna dia afaka mitsidika an'i St. Maarten mandritra ny 1 andro, tsy misy fitiliana, ary tsy mila miditra amin'ny quarantine rehefa miverina any Statia. Ity fepetra fanalefahana ity dia tsy azo ampiharina raha ny isan'ny tranga COVID-19 mavitrika ao amin'ny St Maarten dia ambanin'ny 100 isan-kerinandro.
Ireo mpiasa tonga manao vaksiny dia hohamarinina isaky ny tranga. Na izany aza, ilaina ny quarantine raha tsy hoe ny karazana asa dia mamela fitondrana mora kokoa.
Amin'izao fotoana izao ny Public Entity St.Eustatius dia miasa amin'ny sori-dalana izay misy dingana manokana hanokafana bebe kokoa an'i Statia. Ity sarintany ity dia horesahina voalohany amin'ny Komity foibe amin'ny herinandro ambony.
Ny Departemantam-pahasalamam-bahoaka dia hanomboka hitantana ny fatra faharoa amin'ny vaksininy amin'ny 22 feb 2021. Hatramin'izao dia olona 765 no vita vaksiny tamin'ny fatra voalohany tamin'ny vaksinin'ny Moderna, izay somary mihoatra ny 30% -n'ny olon-dehibe. Hanomboka hitantana ny fatra faharoa amin'ny vaksininy ny Departemantam-pahasalamam-bahoaka amin'ny alatsinainy 22 martsa 2021. Mahatratra 765 ny olona nahazo ny fatra voalohany, somary maherin'ny 30% ny olon-dehibe.
Sandal Grenada amin'ny fisokafan'ny St. George ny 31 martsa